I-Villa Pierre: Ukudala Izinkumbulo Zokuphila
"LINDE UKUZE USHAYEKE NGOKUPHELELE ..." Tiffany, Tennessee, USA
I-villa yesimanje ekhangayo e-rustic, eyimfihlo kakhulu enokubukwa okumangalisayo koLwandle lwe-Caribbean kanye ne-Pitons. Ukushona kwelanga okuhlanyayo, indawo yokuphumula engaphandle, ichibi elisesitezi esikhulu. Ukuzihlukanisa nokuthula, imizuzu emi-5 ukusuka ezinkonzweni!
Le ndlela yokuphila ibingeke iphelele ngaphandle kwakho konke ukunethezeka kwekhaya! Konke kuqala ngekhishi le-French-bistro, elihlome ngokuphelele ngezinto zikagesi ezisezingeni eliphezulu, izinto zokubala zequartz kanye nesitofu segesi esingabasi abangu-6. Endlini enkulu kunamakamelo okulala anomoya opholile onemibhede emibili yobukhulu bendlovukazi, i-en-suite yokugeza yangasese kanye nekhabethe lokungena. Eduze kwendlu enkulu, ehlukaniswe ngokuphelele ne-poolside, indawo yothando nenhle kakhulu yesitayela sase-Caribbean, igumbi elinomoya opholile elinombhede ongusayizi wenkosi onendlu yokugezela ye-en-suite. Iqiniso elithakazelisayo: lesi sakhiwo phambilini sasiyihhovisi likaSaint Lucia's Marine Biologist owadweba imephu yesiqhingi sonke!
I-Villa Pierre ibekwe eceleni kwentaba yase-Moule-à-Chique, indawo yase-Vieux Fort, isikhungo sesibili ngokubaluleka esiqhingini. Nakuba inikezwe zonke izinsiza (izitolo ezinkulu, ama-ATM, izitolo zotshwala, izindawo zokudlela, njll.), i-Vieux Fort inikeza umoya opholile kanye wasemaphandleni, osuswe endaweni yezivakashi futhi ucwiliswe kukunambitheka kwendawo. Lapha uzothola ithuba lokuzwa i-Saint Lucia njengendawo yasendaweni, hhayi njengesivakashi.
Ebangeni elingamakhilomitha angu-15 uzothola: amahlathi emvula, izimpophoma zasezindaweni ezishisayo, izindawo zamagugu omhlaba, ama-Pitons, izizinda, ukugabavula kwamahhashi ogwini, imithombo yemvelo yesibabule, nokunye. Ngemuva kwezinsuku ezigcwele uhambo lwakho, uzothanda ukubuyela ekuthuleni nobumfihlo be-villa, lapho ukunethezeka nokutotoswa kulindelwe. INingizimu iyimfihlo egcinwe kahle kodwa manje nge-Villa Pierre, ungakwazi ukuyihlola ngakho konke ukunethezeka kwekhaya.
Amakhasino, izinxanxathela zezitolo, imikhumbi yokuvakasha kanye nokudla kwasebusuku kusenyakatho. Kuzokuthatha ihora elingu-1.5 ukufika kule ndawo okwenza uhambo losuku olumnandi.
I-Villa Pierre itholakala endaweni ehamba phambili enqamula oLwandle lweCaribbean ukuya eNtshonalanga, noLwandle i-Atlantic ukuya eMpumalanga. Ngakho-ke, imisebenzi yamanzi iyanda: asinalo ulwandle olulodwa kodwa OLUBILI ngaphansi kwemizuzu emi-5! Shono i-Villa Pierre ingenye yezindlu ezingezona ezivamile ze-Trip Advisor kanye ne-TOP ye-Airbnb e-St. Lucia!
I-ATLANTIC COAST: Elinye lamabhishi ase-St Lucia amade kakhulu futhi angonakalisiwe lisendaweni eyimizuzu emi-5. Owayekade eyibhishi le-Club Med, i-Anse des Sables (i-Sandy Beach) iyitheku elivalekile elinamakhilomitha amabili esihlabathi esithambile esiphuzi kanye nomoya onganyakazi. Emabhange ayo uzothola izindawo zokudlela ezimbili (2) ezidume kakhulu zasogwini.
I-CARIBBEAN COAST: Ibhishi elihle laseLaborie liyigugu elifihliwe futhi elingaziwa kubavakashi abaningi. Iqhele ngemizuzu eyi-15 ukusuka e-villa, esigodini sokudoba esimibalabala nesiyiqiniso saseLaborie.